Fukusirwa - Wikipedia
(Redirected from Mafukusirwa)
Shoko rokuti fukusirwa (fossil) riri kushandiswa pano kuturikira mutumbi wechiro chakafa chikafushirwa mungava muvhu kana mumvura panzvimbo yakararama chimiro chacho chisina kupfudzika zvakanyanya kana chichiri kukwanisa kuonekwa kuti chaimbovei.
Shoko reEnglish rokuti fossil rinobva kuFrench yakare richireva what is dug up, pakududzira toti chakafukurwa. Mururimi rweChiShona, kufukusira zvinoreva to scrape a hollow, to burrow apa kutaura kupara pas uchichera mango kana mwena - izvi zvonongedza macherero anoita vanhu vaona nzvimbo ine mafukusirwa, vanochera vachinyenyeredza vachiita chinyai kuri kuvavarira kuchengetedza mafukusirwa asina kumeduka.
Museum dzinoedza kushandisa mafukusira emagekenya, mapfupa kuratidza mhuka dzakararama kare nenguva yadzakararama.
Nyanzvi dzeuronzamabwe dzinoti, marasha ekuHwange nemamwe marasha Pasirose imhando yemafukusirwa emiti yakawa ikafushirwa nevhu, ichibva yamandana kuumba iwo marasha. Vanotizve mafutarubwe imhando yemafukusirwa akashandurwa nepuresha uye kupisa kwemabwe ari pasi pevhu.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Fukusirwa&oldid=45181"
Last edited on 4 Chikumi 2016, at 17:56
This page was last edited on 4 Chikumi 2016, at 17:56.